SYSTEM RESTORE - MIFIDY PROGRAMA IRAY - 2019
Raha efa navaozina hatrany ny solo-nao Apple tamin'ny iTunes, dia fantatrao fa alohan'ny hametrahana ny firmware, dia halefa any amin'ny solosainao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hamaly ny fanontaniana mikasika ny toerana misy ny iTunes ny tahiry.
Na eo aza ny vidin'ny vidin-tsolika Apple, ny mavesa-danja dia mendrika izany: angamba ny hany mpanamboatra izay nanohana ny fitaovany nandritra ny efa-taona mahery, ny famoahana ireo dikan-teny maoderina ho azy ireo.
Ny mpampiasa dia afaka mametraka ny firmware amin'ny alalan'ny iTunes amin'ny fomba roa: amin'ny alàlan'ny famandrihana mialoha ny fandefasana famandrihana tianao ary mamaritra azy ao amin'ny programa na manolotra ny famerenana sy fametrahana ny firmware iTunes. Ary raha amin'ny tranga voalohany, ny mpampiasa dia afaka manapa-kevitra samirery hoe aiza no hikirakira ny fikirakirana eo amin'ny solosaina, ary amin'ny faharoa - tsia.
Aiza ny iTunes no mitahiry ny fikandrana?
Ho an'ireo version hafa amin'ny Windows, ny toerana misy ny firmware izay iTunes downloaded dia mety miovaova. Saingy alohan'ny ahafahanao manokatra ny lahatahiry izay ahafahana mividy ny rindrambaiko maimaim-poana, dia mila manazava ny rakitra sy ny rakitra miafina ao amin'ny fikandrana Windows.
Mba hanaovana izany, sokafy ny sakafo "Control Panel", mametraka ny fomba fampisehoana any amin'ny zoro havanana amin'ny farany "Ikon kely"ary avy eo dia mandeha amin'ny fizarana "Options Explorer".
Ao amin'ny varavarankely misokatra, mandehana any amin'ny tablette "Jereo "midina any amin'ny faran'ny lisitra ary mariho ny mari-pamantarana amin'ny teboka iray "Ampidino ny rakitra miafina, ny rakitra ary ny safidy".
Rehefa ajanonao ny fampisehoana rakitra sy rakitra miafina, dia azonao atao ny mahita ny rakitra ilaina amin'ny fikandrana amin'ny Windows Explorer.
Ny toerana misy ny firmware ao Windows XP
Ny toerana misy ny firmware ao Windows Vista
Ny toerana misy ny firmware ao Windows 7 sy ambony
Raha mitady fikandrana ianao fa tsy amin'ny iPhone, fa ho an'ny iPad na iPod, ny anaran'ny solosaina dia hiova arakaraka ny fitaovana. Ohatra, ny tranokala miaraka amin'ny fikandran'ny iPad amin'ny Windows 7 dia hitovy amin'izany:
Raha ny marina dia izany rehetra izany. Ny tontolon'ny finday dia azo adika sy ampiasaina arak'izay ilainao, ohatra, raha te halefa any amin'ny toerana mety amin'ny ordinatera ianao, na hanesorana firmware fanampiny izay maka toerana be dia be ao amin'ny solosaina.